कर्मचारी समायोजन गर्दा केही नीतिगत त्रुटि भएका छन्, त्यो सच्याउनु पर्छ : हरि रावल - Nepal's News Portal
काठमाडौं । यही चैत्र १४ गते सरकारले निजामती कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा नै गर्यो । तर पनि समायोजन प्रक्रिया विभेदपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टिहरु व्यापक रुपमा सार्बजनिक भईरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरु त आन्दोलित नै छन् । उनीहरुले त सरकारलाई आगामी आईतबारसम्मका लागी संवादको वातावरण बनाउन भन्दै ७२ घण्टे अल्टिमेटम समेत दिएका छन्,त्यसो नगरिए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने बताईरहेका छन् । तर सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संबिधान विपरीत सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिईरहेका छन् । सरकार र कर्मचारीहरुको यस्तो फरक फरक अडान जारी रहँदा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा खास समस्या के हो त भनेर एशियन संवाददाताले नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलसंग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, रावलसंग गरिएको कुराकानी ।
कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भईसक्यो भनेर सरकारले भनेको छ । तर जताततै असन्तुष्टिहरु देखिए, कर्मचारी समायोजनमा खास समस्या के हो त ?
मुख्यगरी नीति मै समस्या देखिन्छ । ट्रेड युनियन वा सरोकारवाला पक्षसँग सल्लाह नै नगरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । ट्रेड युनियनले दिएका सुझावहरुलाई वेवास्ता गरेका कारण माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु हावी भए । उपसचिवसम्मको कोही पनि कर्मचारी फिल्डमा जानु नपर्ने मापडण्द बनाईयो । सबै संघमा मात्रै रहने नीति अबलम्बन गरियो । त्यसकारण प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले कर्मचारीको अभाव छ । यो समस्या आउनुमा कर्मचारी समायोजनको मापदण्डमै विभेद भएर हो ।
कर्मचारी समायोजनको मापदण्डमा के कुरामा विभेद छ, प्रष्ट हुने गरि भनिदिनुहोस् न ?
यदि विधि र प्रक्रिया मार्फत समायोजन गरेको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । ५५ नम्बरमा भएको कर्मचारी सिन्धुपाल्चोक पुग्नुपर्ने र ५५ सय नम्बरमा भएको कर्मचारीले उपत्यकाभित्रै बस्न पाउने स्थिति हुन्नथ्यो । तर त्यही भएको छ । यो नै विभेद भयो । यो यही ३ नम्बर प्रदेशमा भएको वास्तविक कुरा हो । अन्य प्रदेशमा पनि त्यस्तै छ । ५ नम्बर प्रदेशमा अलिकति विधिगत ढंगले गरिएको छ भन्ने कुरा छ । अरु समग्र प्रदेशमा त्यही पुरानै तरिका र विधिबाट समायोजन गरिएको छ । यो समायोजन प्रक्रियाको खिल्ली उड्ने गरी कर्मचारीहरुलाई खटाउने काम भएको छ । यो प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंगले सफ्टवेरले गरेको भनिएको छ तर सफ्टवेरले नगरेको अनुुभूती कर्मचारीले गरेका छन् । ट्रेड युनियनसँग पनि यस्तै समस्या ल्याएर कर्मचारी आउने गरेका छन् ।
कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधानको उपाए के हो त ?
यसलाई मूलबाटै सुधार गर्नुपर्छ । सचिवदेखि तल फेरी रिभिजन गर्न सकिन्छ । यदि रिभिजन गरेर पठाउने हो भने केन्द्रमा जति दरबन्दि छ,त्यसलाई कटौती गर्दै ती दरबन्दिलाई स्थानिय तथा प्रदेश तहमा लैजानुपर्छ । अहिले केन्द्रमा ४७ हजार दरबन्दि सिर्जना भएको छ । त्यसमा दुई/तीन हजार फेरी प्रोजेक्टहरुको भनेर लगभग ५० हजारको हाराहारीमा संघमा दरबन्दि रहेको छ । जोडदार रुपमा यो पनि भन्न चाहन्छु, केन्द्रमा ४७ हजारको दरबन्दि हुनुहुन्न । तिनीहरुलाई स्थानिय तह र प्रदेशतिर खटाइनु पर्छ भन्ने हाम्रो सङ्गठनको माग छ । अहिले हामीले त्यही ढंगले लविङ् गरेका छौं । अहिले पछिल्लो चरणमा मन्त्रीले पनि दरबन्दिमा रिभिजन हुनसक्छ भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ ।
त्यसो त समस्याहरु समाधानका लागी सरकारले गुनासो व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरेको छ नी , त्यसमार्फत समस्या हल गर्न सकिदैन ?
गुनासो ब्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । त्यहाँ अहिले १४ हजारको हाराहारीमा गुनासोहरु छन् भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौं । अझ भन्नुपर्दा दुर्गमका कर्मचारीहरुले त अझै गुनासो बिसाउनै पाएका छैनन् । आएका गुनासोहरुको नै संबोधन नभएका बेला त्यसमार्फत समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन ।
अहिले कुन–कुन क्षेत्रका कर्मचारी समायोजन भएका छन् नी ?
निजामति र स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु मात्रै समायोजन भएका छन् ।
यसो गर्दा त थुप्रै कर्मचारीहरु छुटे नी है ?
हो, थुप्रै छुटे । निजामति कर्मचारीहरु पनि कति त फारम नभरेका कारण छुटेका छन् र अन्य कर्मचारीहरु पनि छुटेका छन्। संघ–संस्थान, बैंकिङ् क्षेत्रका कर्मचारीहरु पनि छुटेका छन् । किनकि यो समायोजन अध्यादेशले ती क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई गाइड नै गरेको छैन ।
अब कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न भएकोमा दुईमत छैन,सरकारले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?
अहिले आइरहेको ब्यापक गुनासाहरु सरकारले सुनिदिनुपर्छ । स्थानिय तहमा काम गर्न जाने कर्मचारीहरुलाई इन्टेन्सिभको रुपमा मोटिभेसन कसरी गर्न सकिन्छ,त्यो मोटिभेट गराएर पठाउनुपर्यो । जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख काम नै संघियता हो भनिन्छ तर जनताको घर–घरमा सेवा पुर्याउने कर्मचारीहरु नै त्यहाँ पुगेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा जनताले सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसका निमित्त पुनः ती निवेदन दिएका कर्मचारीहरुलाई प्राथमिकिकरण गरेर उनीहरुले मागेका ठाउँ स्थानिय तहमा पठाउने गर्नुपर्यो । अर्को, जो पहुँच नभएका कर्मचारी दुर्गममा छन् र जनतालाई सेवा प्रवाह गरीरहेका छन्, ती प्रक्रिया थाहा नपाएका कर्मचारीहरुलाई पनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निवेदन दिने ब्यबस्था गर्नुपर्यो र तल स्थानिय तहमा जाने कर्मचारीलाई अलि आकर्षित गनुपर्यो ।अहिलेसम्म स्थानिय तहमा सुब्बा र खरदार स्तरका कर्मचारीहरुले काम गरेका थिए । अहिलेको अवस्थामा ती सबैले संघ रोजेका छन् । यसकारण स्थानिय तह खाली हुने अवस्था देखिएको छ । तर कैयौं प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि जान चाहिरहेका छन् । त्यसैले मुख्यरुपमा अब समाधानतिर जान जरुरी छ ।
तपाईको भनाई अनुसार कर्मचारीले मागेको ठाउँमा पठाउनुपर्छ भन्दा त सबैले सुविधा भएको ठाउँमा मात्रै रोज्लान, त्यसो हुँदा फेरि समस्या होला नी ?
हामीले एउटा मापदण्ड त बनाएका छौ नि । उदाहरणको रुपमा कुनै कर्मचारीले म सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा काम गर्दिन, म सुर्खेतको चौकुनेमा बस्छु ,त्यहि खटाइदिनु पर्यो भनेर निवेदन दिएको छ भने विरेन्द्रनगर त रित्त भयो नी । फेरी अर्को कुनै कर्मचारीले विरेन्द्रनगर रोज्न सक्ला । यदि विरेन्द्रनगर पाए भने संघमा नभई विरेन्द्रनगरमा नै काम गर्छु भन्ने कर्मचारी पनि त छन् । यस्तो हुँदा कर्मचारीहरु यता र उता जाने स्थिति देखिन्छ । जस्तै फिल्डमा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई फिल्डमा खटाउन के आपत्ति भो र ? त्यसैले सरकारले विचार गर्यो भने समस्या हल हुने देखिन्छ र मलाई लाग्छ, यदि त्यो ढंगले हामीले कर्मचारी खटाउन सकेनौं भने हिजोका ६६/६७ सय वडाहरुमा खरदार सुब्बाहरु काम गरिरहेका थिए,त्यो भन्दा १८/१९ हजार खरदार सुब्बाहरु अझै चाहिन्छन् । त्यहाँ कृषिको ज.टि.ए.,भेटेनरी प्राविधिक, महिला विकास कार्यालय, खानेपानिको इन्जिनियर, सडकको इन्जिनियर जस्ता कर्मचारीको अभाव छ । केवल प्रशासनिक कर्मचारी र हिजो काम गर्ने कृषि, भेटेनरी र स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले धानेका छन् । तिनिहरुलाई त्यहाँ खटाईरहनको निमित्त उनीहरुले रोजेको अनुसार प्राथमिकता दिईयो भने समस्या हल हुने दिशातिर जान्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्ने अबश्था छ की छैन त अहिले ?
त्यो अबश्था छ । त्यसका लागी जबसम्म सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत भर्ना गर्दैन, त्यहाँसम्म कर्मचारी फूर्तिलो हुदैनन् । त्यसो हुँदा सरकारले जति सक्यो चाँडो प्रदेश लोकसेवाको गठन गरेर कर्मचारी पूर्ति गर्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा पहिला प्रदेश र स्थानिय तहमा खट्ने कर्मचारीलाई केन्द्रको लोकसेवा आयोगले तुरुन्त प्रदेश र स्थानिय तहको लागी विज्ञापन आह्वान गरेर कर्मचारी खटाउने वातावरण बनाउनु पर्यो ।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा निजामति कर्मचारीमा पनि असन्तुष्टी छन् तर अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी मात्र आन्दोलीत हुनुको कारण के होला ?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै २६÷२७ हजार कर्मचारी छन् । तिनीहरुको समायोजना वैज्ञानिक ढंगले हुन सकेको छैन जसका कारण उनीहरु आन्दोलन गर्ने अबश्थासम्म पुगेका हुन् । यसको अर्थ अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको समस्या समाधान भईसक्यो भन्ने होइन । अरुको समस्या हल भएको भए त स्थानीय तह, प्रदेश तहमा कर्मचारीको अभाव नै हुन्नथ्यो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको समस्या समाधान होला त ?
समाधान गर्नुको विकल्प नै छैन । छलफल गर्नुपर्यो सरकारले, उनीहरुको समस्या सबोधन गर्नुपर्यो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीसंग त वार्ता नै नगर्ने भनेर मन्त्रि ज्यूले भनिसक्नुभएको छ त ?
त्यो समस्याको समाधान होइन । छलफल त गर्नैपर्छ सरकारले । उनीहरुका गुनासोहरु त सुन्नैपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र निजामति कर्मचारीहरुको एक तिहाई रहेको क्षेत्र हो । त्यहाँ २६/२७ हजार भन्दा बढी कर्मचारी छन् । उनीहरुको राम्ररी समायोजन हुन सकेको छैन । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्यामा सरकार गंभीर हुनैपर्छ ।